Umgaqo-nkqubo weeKuki- Mili yam
1. Ivenkile ayizukuqokelela ngokuzenzekelayo nayiphi na ingcaciso, ngaphandle kolwazi oluqulathwe zicookies.
2. Iikuki (ezibizwa ngokuba "ziicookies") ziyidatha ye-IT, ngakumbi iifayile zombhalo, ezigcinwe kwisixhobo sokuGcina soMsebenzisi kwaye senzelwe ukusebenzisa iwebhusayithi yeeVenkile. Iicookies zihlala zinegama lewebhusayithi ezivela kuyo, ixesha lokugcina kwazo kwifowuni kunye nenombolo eyahlukileyo.
3. Iziko elibeka iicookies kwisixhobo sokugqibela soMsebenzisi weVenkile kunye nokufikelela kubo ngumsebenzi weSitolo.
4. Iicookies zisetyenziselwa: o ukulungelelanisa imixholo yeewebhusayithi zeVenkile ngokokukhetha koMsebenzisi kunye nokwandisa ukusetyenziswa kweiwebhusayithi. Ngokukodwa, ezi fayile zivumela ukuqaphela isiXhobo soMsebenzisi weSitolo kunye nokubonisa ngokufanelekileyo iwebhusayithi, elungiselelwe iimfuno zakhe ezizodwa; o ngokuqulunqa izibalo ezinceda baqonde indlela Abasebenzisi beeVenkile abazisebenzisa ngayo iiwebhusayithi, ezivumela ukuphuculwa kobume kunye nomxholo;
5. Ivenkile igcina iintlobo ezimbini ezisisiseko zicookies: "iseshini" cookies kunye "ezingapheliyo" cookies. Iicookies zeseshoni ziifayile zethutyana ezithi zigcinwe kwisixhobo somsebenzisi sokugqibela de babe bayeke iwebhusayithi okanye bacime isoftware (isikhangeli sewebhu). Iicookies ezingapheliyo zigcinwa kwisixhobo somsebenzisi sokugqibela sexesha elichazwe kwiiparamitha zekhukhi okanye de bacinywe nguMsebenzisi.
6. Ivenkile Ivenkile isebenzisa ezi ndlela zilandelayo zicookies: ii-cookies "eziyimfuneko", ezivumela ukusetyenziswa kweenkonzo ezikhoyo kwiVenkile, umz. Iikuki ezingqinisisiweyo ezisetyenziselwa iinkonzo ezifuna ukuqinisekiswa kwiVenkile; iicookies ezisetyenziselwa ukuqinisekisa ukhuseleko, umzekelo esetyenziselwa ukufumana ubuqhetseba kwicandelo lokuqinisekiswa ngaphakathi kweVenkile; "Iikuki" zokwenziwa komsebenzi, ezenza ukuba kuqokelelwe ulwazi ngendlela yokusebenzisa iwebhusayithi yeeVenkile; "Iikuki" ezisebenzayo, zenza ukuba "ukhumbule" useto olukhethwe nguMsebenzisi kunye nokwenza ubume bomsebenzisi buqu, umz. Ngokolwimi okanye ummandla wemvelaphi yomsebenzisi, ubungakanani befonti, imbonakalo yewebhusayithi, njl. Njl. "I-cookies" zentengiso, ezenza ukuba abasebenzisi banikeze umxholo wentengiso ulungiselelwe iimfuno zabo.
7. Kwiimeko ezininzi, isoftware esetyenziselwa ukukhangela iiwebhusayithi (isikhangeli sewebhu) ngokuzenzekelayo ivumela ikuki zigcinwe kwisixhobo somsebenzisi sokugqibela. Abasebenzisi beeVenkile banokutshintsha iisetingi zabo zekhukhi nangaliphi na ixesha. Ezi seto zinokutshintshwa ngakumbi ngendlela yokuba zithintele ukuphathwa ngokuzenzekelayo kweicookies kuseto lwebrawuza yewebhu okanye ukwazisa ngazo ngalo lonke ixesha zibekwa kwisixhobo soMsebenzisi seVenkile. Ulwazi oluneenkcukacha malunga nokunokwenzeka kunye neendlela zokuphatha ikuki zifumaneka kwisoftware (isiphequluli sewebhu).
8. Umnxibelelanisi wevenkile uxelela ukuba izithintelo ekusetyenzisweni kweicookies zinokuchaphazela imisebenzi efumaneka kwiwebhu yeevenkile.
9. Iicookies ezibekwe kwisixhobo soMsebenzisi wokuGcina zingasetyenziswa ngabathengisi kunye namahlakani asebenzisana nomsebenzisi weVenkile.
10. Ulwazi oluthe kratya malunga ne-cookies lufumaneka kwi www.sdinakduchi.pl okanye kwicandelo elithi "Uncedo" kwimenyu yesikhangeli sewebhu.